"Ukuzamazama komhlaba kwekhulu" okulandelayo kungenzeka eChile | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuzamazama komhlaba okulandelayo »kwekhulu leminyaka» kungenzeka eChile
Iplanethi isentuthukweni eqhubekayo. Izingcezu ezinkulu ze-puzzle ezakha, lokho esikubiza ngokuthi ama-plate tectonics, beziqhubeka kusukela ekuqaleni kwesikhathi. Lokhu yinto okumele umuntu aphile nayo. Nsuku zonke kuba nokuzamazama komhlaba okuningi emhlabeni jikelele; ngenhlanhla, bambalwa kuphela abazwayo.
Enye yezinto ezingabhubhisa leli khulu leminyaka ingenzeka eChile, izwe lapho kuvame khona ukuthi kwenzeke okubi kakhulu.
Ithimba lososayensi baseChile nabaseFrance bafinyelele kulesi siphetho ocwaningweni olushicilelwe ephephabhukwini elithi "Earth and Planetary Science Letters". "Ukuzamazama komhlaba kwekhulu leminyaka" okulandelayo kungavela edolobheni laseValparaíso, elisendaweni engamakhilomitha ayikhulu ukusuka eSantiago de Chile. Ngobuncane bamaphuzu ayi-8,3 esikalini sikaRichter, kungaba umcimbi oyingozi kakhulu kulabo abakhona ezweni njengamanje.
IChile izwe lapho ukuzamazama komhlaba okungahle kube khona okulimazayo kwenzeka kaningi. Emlandweni wethu wakamuva, kufanelekile ukuphawula okwenzekile UMeyi 22, 1960 eValdivia, eyayinobukhulu obungu-8,5, the Mashi 11, 2010 ePichilemu, futhi enobukhulu obungu-8,5 amaphuzu esikalini sikaRichter, noma Septhemba 16, 2015 eCoquimbo ngesilinganiso esingu-8,4. Kodwa kungani kukhiqizwa okuningi kangaka kule ngxenye yomhlaba?
Impendulo yalo mbuzo ezitholakala emapuletini ama-tectonic ngokwawo, ikakhulukazi, kupuleti leNazca naseNingizimu Melika. Abokuqala bahlangana ngaphansi kwesibili ngesilinganiso esingamasentimitha amathathu ngonyaka, ukuze kuvela igebe lamamitha angu-4,5 elinxephezelwa njalo eminyakeni engama-70, okubangela lokhu kuzamazama komhlaba okuyingozi.
Ukuze wazi okuningi, ungenza chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Ukuzamazama komhlaba okulandelayo »kwekhulu leminyaka» kungenzeka eChile
Ingabe i-Amazon ingakwazi ukusinda ekuguqukeni kwesimo sezulu?